Gịnị bụ ihe ndị kasị mma obí eze Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị bụ ihe ndị kasị mma obí eze Na Europe
Train Travel Austria, Ingbọ oloko na Belgium, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Luxembourg ụgbọ oloko, Travel Europe
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 20/02/2020)
Ọtụtụ obodo na Europe nwere a mara mma n'obí (ma ọ bụ abụọ) isere na njem nleta. Ọ bụ ya mere na ọ bụ ike na-ekweta ihe ise kasị mara mma obí eze na Europe bụ. Ka anyị nwere a lee anya na anyị nhọrọ nke kasị mma obí eze Na Europe:
1. Mara mma obí eze na Europe na France Chateau de Versailles
Versailles bụ ikekwe otu n'ime ndị kasị ama castles n'ụwa, na ọ na-emekwa kwesịrị aha. Ọ bụ a ọla nke narị afọ nke 18 French art, opulent ma ọgaranya artworks na ịma mma.
Ọ e gbasaa site ama French onye na-achị Louis XIV, kwagara ma ndị ikpe na ọchịchị Versailles na 1682. The chateau bụ Central ebe ike na France ruo mgbe mgbanwe ke 1789. Ugbu a ọ bụ otu n'ime ndị kasị ama njem nleta ebe n'ụwa.
Windsor bụ a na-arụ ọrụ n'obí na bụ n'etiti ndị kasị mma ulo elu na Europe, ndị kasị ochie na kasị nnukwu ụlọ dị n'ụwa na ka nwere bi. The British Queen emefu ya onwe ngwụsị izu na Windsor.
The akụkọ ihe mere eme nke Windsor Castle bụ fọrọ nke nta 1000 afọ ogologo. Kemgbe ọtụtụ narị afọ, ọ dịla n'ụlọ ọtụtụ ama òtù British eze. Nnukwu ụlọ nwere St. George si banye n'Ụlọ Ekpere, na ili ozu na saịtị nke iri eze, na State N'ụlọ na-juputa na Royal Collection akụ.
3. Grand Ducal Obí Luxembourg
The Grand Ducal Obí Luxembourg na Luxembourg City bụ ukara obibi nke Grand Duke. Ọ na-eji ya maka ọtụtụ n'ime ya ukara ọrụ, tinyere Grand Duchess. N'obí nwekwara-ndebe-ha, nakwa dị ka staterooms.
The ụlọ mbụ ji mee ihe dị n'ụlọ ezumezu obodo mgbe ọ na e wuru na 1572. na 1817, ọ ghọrọ ukara obibi nke Gọvanọ. The Grand Ducal Obí anya resplendent na Flemish Renaissance style na nke ahụ bụ otu n'ime ihe mere na ọ bụ na anyị na ndepụta nke Kasị Beautiful ulo elu na Europe. Ọ nwere otu nke kasị mma facades na obodo, nakwa dị ka a ọmarịcha n'ime ime.
Antwerp ka Luxembourg Ụgbọ oloko
Brussels ka Luxembourg Ụgbọ oloko
Metz ka Luxembourg Ụgbọ oloko
Paris na Luxembourg Ụgbọ oloko
Neuschwanstein kwesịrị ya n'etiti ndị kasị mma obí eze na Europe esighịkwa ya magburu na breathtaking ije. A nnukwu ụlọ anya ka ọ bịara ogologo nke a akụkọ-akụkọ. N'ezie, ọ e ji dị ka mmụọ nsọ n'ihi na nnukwu ụlọ na Disney si Ihi ụra Beauty.
Ọ bụ a narị afọ nke 19 Romanesque Revival n'obí. Art akụkọ ihe mere eme na gburugburu ụwa na-atụle ya otu n'ime ihe nnọchianya nke Romanticism. King Ludwig II nke Bavaria wuru Neuschwanstein dị ka ya ichighaazu na 1837. Mgbe King ọnwụ na 1886, ọ ghọrọ na-emeghe ka ọha na eze.
Ulm ka Fuessen Ụgbọ oloko
Munich na Fuessen Ụgbọ oloko
Stuttgart na Fuessen Ụgbọ oloko
Nuremberg na Fuessen Ụgbọ oloko
5. Mara mma obí eze na Europe na Austria – Schloss Schonbrunn
Otu n'ime ọtụtụ ugboro ugboro gara nlegharị anya na ọtụtụ Beautiful obí eze na Europe bụ na Vienna, Austria, Schonbrunn bụkwa a World Cultural Heritage saịtị. N'obí malitere dị ka a na-achụ nta ebi maka Emperor Leopold m. Ọ e wuru na narị afọ nke 17. Schonbrunn bụ onye nke kasị mma ọrụ nke-atụpụta ụkpụrụ ụlọ Bernhard Fischer von Erlach.
Kemgbe ahụ, Schonbrunn nwekwara hụrụ iji dị ka ogige nke Maria Theresa, mgbe nke ọ ghọrọ Central mgbe na usu ihe ndị metụtara nke ala. Wuru na Baroque style, n'obí ka ukwuu n'ime nọgidere ya mbụ ọnọdụ. Ya pụrụ iche ije na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe ndị kasị enchanting ebe ileta na Europe.
Ọ bụrụ na ị dị njikere na-eme atụmatụ gị na njem gburugburu ise kasị mara mma ulo elu na Europe, ndị a bụ ebe i nwere ike na-atụ uche. All ndị a ebe nwere ike ruru mfe via ụgbọ okporo, ka akwụkwọ gị tiketi na-amalite na atụmatụ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-palaces-europe%2F/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / de na / es ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.